कलाकारको आगमन र ‘जागमन’
मनोज गजुरेल, अभिनेता
स्वभावतः कलाकार पनि सामाजिक प्राणी हुन्। सामाजिकप्राणी भएको नाताले उनीहरूले राजनीतिप्रति चासो राख्नु स्वाभाविक हो। त्यो उनीहरूको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व पनि हो।
तर, राजनीति भनेको सिनेमाजस्तो करिस्मायुक्त हुँदैन, गीतजस्तो कोमल हुँदैन र रेखाजस्तो सोझो हुँदैन। त्यहाँभित्र निर्ममता, कूटनीति, समर्पण, खेल–झेल, पार्टीपद्धति, असल–खराब जस्ता तानाबाना हुन्छन्। जुन एउटा कलाकारको क्षमताभन्दा परको कुरा हो।
राजनीतिका विकृत पक्षहरू धेरै होलान्। तर, त्यहाँभित्र राम्रा पक्ष पनि छन्। त्यहाँ पार्टीपद्धति हुन्छ। त्यहाँ योगदानका कुराहरू आउँछन्। लामो समयदेखि दुःख गर्दै आएका कार्यकर्ता त्यहाँ जोडिन्छन्। उनीहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेरचर्चित व्यक्तिको नाम लिएर ह्वात्तै माथि पु¥याउन खोज्दा पार्टी र व्यक्ति दुवैलाई घाटा हुन्छ। पार्टीहरूले सकेसम्म घाटाको व्यापार गर्दैनन्। पहिला पार्टीले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ।
‘राजनीतिक दलले कलाकारलाई प्रयोग गरे’ भन्नुको अर्थ कलाकारले पनि दलहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर बुुझ्नुुपर्छ।उपयोग एकले अर्कालाई गरेकै हो। यसलाई दुरुपयोग भन्न मिल्दैन। किनभने, कलाकारलाई त आफ्नै मञ्च राम्रो हुन्छ। त्यहीँ उनीहरूका लागि ताली बज्छ।
त्यहीँबाट उनीहरूले बजेट राम्रो पाउँछन्। राजनीतिमा लाग्न के जरुरी हुन्छ र ? तर, कलाकारका पनि पनि आफ्नै इच्छा र अपेक्षा होलान्। ‘राजनीतिमार्फत समाजसेवा गर्छु’ भन्ने सोच हुन्छ होला। त्यो पनि एकप्रकारको उपयोग नै हो। पार्टीलेकलाकारको लोकप्रियतामार्फत फाइदा लिन खोज्छ। कलाकारले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हेर्छ। दुवैले नाफा–घाटा हेर्छन्।
राजनीतिको रङ भनेको सेतो वा कालो हुँदैन। त्यो समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले कलाकारले राजनीतिमा हाम्फाल्नुअगाडि ‘म त्यहाँ फिट छु÷छैन, मेरो व्यवहार, स्वभाव र चरित्र त्यहाँ फिट हुन्छ÷हुँदैन’ भन्नेकुरा बुझ्नु जरुरी छ। कलाकारको चरित्र, लोकप्रियता र चर्चा एकातिर हुन्छ।
त्यसलाई छोडेर अर्कोतिर लाग्दा अवश्य पनि धक्का लाग्छ।राजनीतिमा लागेपछि त्यहाँको संगठन र नीति–नियममा मान्छे बाँधिन्छ। त्यो बेलामा उसलाई उकुसमुकुस हुन्छ। सकस हुन्छ। त्यसपछि ऊ त्यहाँबाट विद्रोह गरेर अर्को ठाउँमा जान्छ। यसरी डेरा सर्दै जानाले कलाकारको अडान र लोकप्रियता दुवैमा ह्रास आउँछ।
जोसँग जे क्षमता छ, त्यही क्षमताको दायरमा बसेर राजनीति गर्नुपर्छ। जस्तो, करिश्मा मानन्धरले सिनेमा क्षेत्रको चलचित्र विकास बोर्डमा नेतृत्व लिने हो। कोमल वलीले लोकसंगीत र संस्कृतिबारे अनुसन्धान गरेर राज्यको एउटा अंग सम्हाल्ने हो। त्यस्तै,अर्को कुनै कलाकार राजनीतिमा लाग्छ भने आफ्नो विषयविज्ञताका आधारमा लाग्नुपर्छ।
कलाकार भनेकोहृदयले चल्ने जात हो। तर, राजनीति मस्तिष्कले चल्छ।हृदय लिएर राजनीतिमा गइयो भने अगाडि बढ्न गाह्रो छ। हृदय भनेको भाव हो। भाव आफ्नो गतिले दौडिन्छ। त्यसले दायाँ–बायाँ सोच्दैन। तर, मस्तिष्कमा हिसाब मिलान हुन्छ। त्यो भनेको गणित नै हो। जोड–घटाउ, लिनु–दिनु सबै चल्छन्। कम मात्रै पात्र हुन्छन्, जो हृदयले राजनीति गर्छन्। हृदयले गरेको राजनीतिले केही हदसम्म सकारात्मक तरंग उत्पन्न गर्छ। तर, ठूलो परिवर्तन ल्याउन भने गाह्रै पर्छ।
आफू जुन विधामा पोख्त हो, त्यही विषयमा केन्द्रित भएर आफूलाई राजनीति र समाजसँग जोड्न सक्नुपर्छ।कलाकारहरू राजनीतिमा गएर सफल भएका घटना ज्यादै कम छन्। नेपालमा पनि विगतमा केही कलाकार पार्टीमा गए। तर, उनीहरूले आफूलाई राजनीतिज्ञभन्दा पनि कलाकारकै रूपमा पार्टीमा प्रस्तुुत गरे। राजनीतिमा कलाकारहरू सचेत भएर लाग्नु एकदमै सुन्दर पक्ष हो। तर, एउटा अपेक्षा बोकेर ‘म सांसद् वा मन्त्री नै बन्छु’ भनेर जाँदा नसोचेको धोका खाइन्छ।
आफ्नो भित्री तस्बिर अरूले भन्दा आफैँले देख्न सकिन्छ। त्यस्तै कलाकारले पनि ‘म को हुुँ? मेरो हैसियत के हो?’ भन्नेकुरा थाहा पाउनुपर्छ। कसैले उचालेको भरमा, कसैले ताली पिटेका भरमा वा कुुनै नेताले सपना देखाएको भरमा राजनीतिमा लाग्ने होइन। मुख्य कुरा आफ्नो आन्तरिक शक्ति पहिचान गर्नुपर्छ।
कलाकारलेदलीय राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले आ–आफ्ना क्षेत्रबाट जे–जस्तो गरिरहेका छौँ, त्यो पनि एकप्रकारको राजनीति नै हो। म हास्यव्यंग्य गर्छु, त्यसमा समाज रूपान्तरणका कुराहरू हुन्छन्। त्यो एउटा कलाकारिता मात्रै हैन, एउटा राजनीति पनि हो। हामीले गर्ने भनेको एउटा कलात्मक राजनीति हो।
तर, जो कलाकार राजनीतिक रूपले सचेत छन्, ‘कलाकारिताभन्दा पनि राजनीतिमार्फत समाजलाई केही दिन चाहन्छु’ भनेर लागेका छन्, उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ। भोट बटुल्नका लागि मात्रै उनीहरूलाई उठाउनु हुँदैन। यसले कलाकार र पार्टी दुवैको भविष्य अन्योलमा पर्छ।
कोही कलाकार राजनीतिमा जाने बित्तिकै त्यो कलाकार हुँदैन। ऊ नेता बन्छ। कलाकारले भनेको कला दिने हो। जब मन्त्री र सांसद् हुने आकांक्षा कसैले राख्छ भने त्यो नेता नै हो। राजनीतिमा कलाकारको आगमन र ‘जागमन’ त्यसकै परिणाम हो। अपेक्षा राखेर राजनीतिमा लाग्नु कलाकारकै कमजोरी हो।